သဲများနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မော်နီကာဆန် | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 21/03/2016 11:32 | မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ
အ သဲနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများ သူတို့ကမယုံနိုင်လောက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပါ၊ သူတို့သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတစ်မြို့လုံး၏မြင်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားရန်အချိန်များစွာယူနိုင်သည်။
၎င်းတို့မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကိုသင်သိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြမည့်အတိုင်းမော်နီတာမှသင်၏မျက်လုံးများကိုမပိတ်ပါနှင့် သူတို့ဘာတွေလဲ၊ ဘာကြောင့်ဒီမတူတဲ့မုန်တိုင်းတွေပေါ်ပေါက်ရတာလဲ.
သဲများနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြင်သာမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သူတို့သည်လမ်းပေါ်တွင်ဆိုးဝါးသောအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမေဇုံသစ်တောလိုသစ်တောတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တယ်ဒါဆိုသူတို့မှာအကောင်းမြင်ဘက်လည်းရှိတယ်။
သဲမုန်တိုင်းများသည်ခြောက်သွေ့သောဒေသများမှသဲအမှုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ လေအရှိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှဤအမှုန်များသည်အထက်သို့ရွေ့လျားသည်။ အလျားလိုက်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးခရီးသွားလာနိုင်ဖြစ်ခြင်း.
သူတို့အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့်မြေများမှာထိုမြေများဖြစ်သည် အပင်တစ်ပင်မျှမကျန်တော့ပါ အချို့သောအချက်များသည်အမှုန်များကိုအပေါ်သို့မြှင့်တင်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဥပမာ၊ ဆာဟာရသဲကန္တာရသို့မဟုတ်မြောက်အမေရိက၏လွင်ပြင်များတွင်၎င်းတို့သည်အလွန်တွေ့ကြုံရလေ့ရှိသည်။
ဤမုန်တိုင်းအမျိုးအစားများသည်သဲများနှင့်ဖြစ်ပွားသောအဓိကကွာခြားချက်မှာဆိုင်းထိန်းထားသောအမှုန်များကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည်မိုက်ကရိုဖုန်း ၁၀၀ ထက်နည်းသော 100'0cm ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်လာစေရန်ခွင့်ပြုပေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းသည်ဟုခံစားရစေသည်။ ထို့အပြင် ၄ င်းတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်၎င်းတို့သည်တိမ်များဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးသောကြောင့်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်သောနေရာများတွင်မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်နည်းပါးသည်။
အထူးသဖြင့်နွေရာသီကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သို့ဖုန်မှုန့်များရောက်ရှိခြင်းမှလေတိုက်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်ဆာဟာရသဲကန္တာရဖြစ်သည်။
ဤဖြစ်ရပ်အမျိုးအစားများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်aအပူဆနျ့ကငျြဘ မြေကြီးနှင့်လေထု၏အလယ်နှင့်အထက်အလွှာအကြား။ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှလေထုသည်၎င်းတို့မှသယ်ဆောင်လာသည့်ဖုန်များနှင့်အတူထုထည်၏မြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာဟာဒီနေရာမှာမပြီးသေးဘူး၊ ဒါ့အပြင်သူတို့ကဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့မြင့်တက်လာနိုင်အောင်အေးတဲ့တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိဖို့ဒီလေကိုလိုအပ်တယ်၊ နှင့် ၎င်းသည်လေထု၏မြင့်မားသောအလွှာများမှလေအေးကိုဂရုစိုက်လိမ့်မည်။.
ထို့ကြောင့်နွေးထွေး။ ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပြင်ရှိareaရိယာတစ်ခုတွင်တိုကျရိုကျစနစ်ရှိရမညျ။ ရှေ့လေထုစနစ်သည်အအေးဖြစ်သောကြောင့်အခန်းအတွင်းရှိနွေးထွေးသောလေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဖိအားလျော့နည်းစေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လေအရှိန်လည်းတိုးပွားလာပြီး၎င်းအကြားရှိနေရာတွင်ရှိနေသည် 80 နှင့် 160km / h, လှိုင်းလေထန်စေ။ မျက်နှာပြင်အပူချိန်အလွန်ပူနွေးသောကြောင့် convection current များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မြင်သာမှုကိုလျော့နည်းစေသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်သတိထားရမည်။ သင်သူတို့တွေ့နေကျနေရာတစ်ခုတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြာခဏဖြစ်တတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သို့ပြုမူရမည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကားမောင်းနေပြီးသဲသို့မဟုတ်ဖုန်များနံရံပေါ်သို့သင်ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာသည်ဆိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည်မှာ -
ထောင့်မှာရပ်ပြီးစောင့်ပါ ၎င်းသည်သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်မကြာခဏသင်သဲထဲတွင်ရစ်ပတ်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှအဘယ်အရာကိုမျှသင်မတွေ့မြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုများသောအားဖြင့်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာစေရန်ပခုံးဆီသို့ ဦး တည်ကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်လျှင်လမ်းပေါ်မှဆင်းပါ) ပြတင်းပေါက်များကိုပိတ်ပါ။
သင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်သဲများသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများသင့်ကိုတိုက်မိလျှင်သင်၏ပထမဆုံးနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုမျက်နှာဖုံးစွပ်ထားပါ။ မင်းရှိရင် သူတို့ကိုခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင်၏နှာခေါင်းထဲသို့ရေနံဂျယ်လီအချို့ကိုသုံးပါ.
ပြီးတာနဲ့သင်သည်သင်၏မျက်စိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်မျက်နှာကိုလက်တစ်ချောင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လေလုံသည့်မျက်မှန်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပုံမှန်မှန်ဘီလူးများသည်အမှုန်များမှအလွန်အကာအကွယ်မပေးကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ပိုကောင်းလေလုံသုံးပါ.
အခုသင်ခိုလှုံဖို့လိုသည်။ အများဆုံးအကြံပြုသည် တစ် ဦး leeward ဇုန်သို့ရ (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လေလာရာလမ်းကြောင်းမှကာကွယ်သည်) ဥပမာ - သစ်ပင်များသို့မဟုတ်စွန်ပလွံပင်များနောက်ကွယ်မှ; တတ်နိုင်သမျှမြင့်မားသောနေရာ၌နေပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ပျံသန်းနိုင်သောလေးလံသောအရာများမှသင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင်၏ကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူကူညီပါ၊ သို့မဟုတ်သင်တတ်နိုင်သမျှမြေပြင်နီးပါစေ။
သဲနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများကြောင့်ပြmanyနာများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် ပိုကောင်းတဲ့ကြိုတင်သတိပေးပါ။ သင့်ရဲ့မြို့တော်မှာရှိတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေသတိပေးချက်များကိုဂရုပြုပါ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » သဲများနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများမည်သို့ဖြစ်ပွားသနည်း
AdriánRodríguez Areal ဟုသူကပြောသည်
မင်းသိတယ်၊ သူတို့သတိထားမိရင်ငါမသိဘူး။ ၎င်းကိုစာမျက်နှာမှဖတ်လျှင်လည်းကောင်း၊ အစား၊ တည်းဖြတ်သူ၊ သင်ဤအကြံပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာဘုရားရှိခိုးကျောင်းကဲ့သို့သောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်အသေးစိတ်ပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်စာမျက်နှာကိုယ်နှိုက်၏ကောင်းကျိုးကိုသေချာ; အကယ်၍ ၎င်းသည်၎င်း၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများနှင့်အတူတိကျခိုင်မာပြီးတိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရရန်ရည်ရွယ်ပါကအယ်ဒီတာ / အယ်ဒီတာများသည်အောက်ပါတို့ကိုအာရုံစိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်သဲမုန်တိုင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းတို့အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာဖွဲ့စည်းထားသောသို့မဟုတ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအမှုန်များအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ပိုလိုပိုမုန်တိုင်းတွင်၎င်းအမှုန်များသည်ဖုန်မှုန့်နှင့်ပြုလုပ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်; သူတို့၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းသဲကျောက်များနှင့်မတူဘဲလှိုင်းအနိမ့်အမြင့်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလေထုထုများနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလေထု၏သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကြောင့်မြူဆွယ်နေသည်။ သို့သော်ပြtheနာမှာဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်စေသောဖုန်မှုန့်အတောင့်များ၏အတိုင်းအတာကိုဒေတာများကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါသို့မဟုတ်သောအခါဖော်ပြသည်။ စာရွက်စာတမ်းတွင် / ပကတိ»ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်စာတွင်ဖော်ပြခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်အမှုန်များသည်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် ၁၀၀ မိုက်ခရွန်ထက်ငယ်သောအရွယ်အစားရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်အတူတူပင်ကဘာလဲ, 100 μmမိုက်ခရိုမီတာ; မူယူသည်နိုင်ငံတကာယူနစ်များ၏ရှေ့ဆက်အဖြစ်အက္ခရာဖြင့်ရေးသား; ၎င်းသည် ၀.၁ မီလီမီတာ (သို့) ၀.၁ မီလီမီတာအောက်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်သူ၏တိုင်းတာခြင်း 100cm ညီမျှသည် 0,1cm နှင့်မညီမျှသည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကြောင့်လည်းအတူတူပင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသိပ္ပံနည်းကျဟန်ဆောင်ထားသောဆောင်းပါးတစ်ခုအတွက် stratospheric dimension ၏မှားယွင်းမှုကိုဆိုလိုသည်။ ပိုဆိုးတာက ၎င်းကိုပိုမိုတိကျခိုင်မာစေရန်အထူးသဖြင့်သိသာထင်ရှားသောယူနစ် ၇ ခုပါ ၀ င်သည်။ အမှန်တကယ်လုပ်သောအခါအခြေအနေသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်သည်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
AdriánRodríguez Areal အားစာပြန်ပါ